Siddeed ka mid ah tobankii ruux ee reer Iswiidhan ah oo wal wal iyo walaac ka qaba in isdhexgalku guul darreeysto | Somaliska
Siddeed ka mid ah tobbankii qof ee reer Iswiidhan ah waxaa ay qabaan wal wal ku saleeysan in guul darro ku timaado is dhexgalka ama aannu noqon siddii la doonayey. Wargeyska Aftonbladet oo kaashanayey hey’adda tiro koobka sameeysa ee Inizio ayaa sameeyey ra’yi arruurin ay ka qeyb qaateen in ka badan lix kun oo ruux.
Dadyowgan ra’yi arruurinta ka qeyb qaatay ayaa isku raacay ineey wal wal weyn ka qabaan, duufaanta qaxootiga ee dalka ku soo jabay, dagaalka Suuriya iyo saameeynta uu reebi karo. Donald Trump-ka Mareykanka ee dunida ku soo kordhiyey walaac hor leh iyo kooxaha garabka middig ee Yurub ka curtay markale. Arrimahaasi oo dhan waa kuwo walaac ku haya dadkii ra’yi arruurinta ka qeyb qaatay.
Hogaamiyaasha asxaabta siyaasadeed ee dalkaan Iswiidhan oo bishii janaayo ee sanadkan ka qey qaatay dood ka socotay baarlamaanka ayaa in ka badan 48 mar waxaa ay adeegsadeen ereyga “WAL WAL halka 76 jeerna ay sidoo kale a areegsadeen “DAGANNAAN” misna ereyga ” AAN DAGANEYN” ku cel celiyey 26 jeer. Ereyadaasi ay asxaabta siyaasdeed adeegsadeen muddadii uu socday doodii ayaa laga dha dhansanayey walaaca wajiyada badan leh ee nolosha laga qabo guud ahaan gaar ahaan arrimaha qaxootiga, is dhex galka iyo falalka ammaan darro. Wargeyska oo amuurtaas ka duulaya ayaa sameeyey ra’y arruurin, waxaana soo baxday in siddeed ka mid ah tobbankii ruux ay wel wel ka qabaan falalka ammaan xummo ee mudooyinkii ugu dambeeyey magaalooyinka waa weyn ee dalka laga dareemay. Sidaas si la mid ah ayaa walaac looga qabaa in da daaladda loogu jiro is dhexgalka uu keeni waayo natiijo wax ku oolka, waxbarashadda iyo caafimaadka ayaa iyagana ka mid waxyaabaha kale ee la muujiyey in walaac laga qabo.
Wargeyska oo hadalkiisa soo koobaya ayaa sheegay in inta badan dadka reer Iswiiidhan ay dareemayaan ammaan iyo nabad galyo wal walna eeysan ka qabin ammaan xummadda meelaha qaar ka jirta iyo is dhexgalka. Arrintan ayaa imaneeysa ka dib markii toddobaad ka hor uu Trump-ka Mareykanka dalka Iswiidhan ku tilmaamay dal ay waxyeelo ka soo gaartay dadkii ay magangalyadda sii siyeen. Hadalkan ayaa wuxuu buuq iyo sawaxan ka dhex abuuray dalka.